मेरो सङ्घर्ष केवल प्राप्तिको लागि मात्र होइन ।
अन्तरवार्ता 133 पटक पढिएको २०७४ जेष्ठ ०४ बिहीवार
जन्म-२०३७ असार २१ गते शुक्रबार, धनकुटा बहु-प्रतिभावान नेपाली महिला स्रष्टा हुनुहुन्छ । प्रति मष्तिस्क रोग (Cerebral palsy) द्वारा पीडित घिमिरे, उक्त रोगद्वारा पीडित विश्व कै १० प्रतिभावान साहित्यकार मध्ये एक हुनुहुन्छ ।
जन्मदेखिनै आफ्ना हात गोडा नचल्ने, उभिन, हिँड्न, बोल्न नसक्ने तर, सुन्न र बुझ्न चाहीँ सक्नुहुने । उहाँ आफ्नो खुट्टाको ३ औलाको सहयोगले नेपाली साहित्य विधाका थुप्रै कृतिहरु प्रकाशित गरिसक्नुभएको छ । औपचारिक शिक्षा कतैबाटपनि लिन असमर्थ घिमिरेले, घरमा भाइ र बहिनीले पढेको र लेखेको, देखेर र सुनेकै भरमा आफ्नो क्षमता विकास गर्नुभएको कुरा सम्पूर्ण आत्मवृतान्त उहाँकै संस्मरणात्मक निबन्ध जिबन काँडा कि फुल मा सविस्तार वर्णित छ । उहाँको २०५३ सालदेखि नेपाली साहित्य लेखनमा रुचि बढेको हो । नेपालबाट दैनिक प्रकाशन हुने कान्तिपुर र ब्लास्ट टाइम्स पत्रिकामा उहाँका नियमित स्तम्भहरू पनि छापिन्छन् । झमकले कविताराम बाल साहित्य प्रतिभा -२०५५ , अस्वीकृत विचार साहित्य पुरस्कार-२०५६, क्या.गोपालप्रसाद जनकल्याण पुरस्कार -२०५७, प्रबल गोरखा दक्षिण बहु ,चौंथो -२०५७, अपाङ्ग प्रतिभा पुरस्कार -२०५७, डा.बिमलाबाणी पुरस्कार-२०६२, नेपाल सरकार बाट सम्मान -२०६३ क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार-२०६५, धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार-२०६६ मदन पुरस्कार-२०६७, उत्तम शान्ति पुरस्कार-२०६७, शंकर लामिछाने निबन्धकरिता पुरस्कार-२०६७, पद्मा श्री पुरस्कार-२०६७, लैनसिंह वाङ्देल पुरस्कार २०७२, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतबाट मानार्थ विद्यावारिधी २०७३, र झापाको नागरिक अभिनन्दन २०७३ लगायत दर्जनौँ पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ । उनै प्रतिभावान साहित्यकार डा.झमक घिमिरे संग अन्तरर्वार्ता अंश:
१) साहित्य र राजनीति बिच कस्तो सम्बन्ध रहनुपर्छ, सापेक्ष कि निरपेक्ष ?
• साहित्य र राजनीति बीच सम्बन्ध सापेक्ष हुन्छ किनभने साहित्य भनेको । कुनै निरुपेक्ष बस्तु होइन समाजमा जे कुरा घटछ्न् साहित्यमा त्यहीँ कुरा आउँछन् !
२) सिर्जनामा लैङ्गिक चेतको प्रकटीकरणलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
• लिङ्ग भनेको के हो ? महिला पुरुष अनि समलिङ्ग मात्र हो कि अरु पनि छ ? यो त प्राकृतिक कुरा हुन तर यसैलाई ठूलो बनाएर मान्छे विभाजित छन् किन ? साहित्यमा लैङ्गीक चेत किन आयो भने वषौदेखि कम्जोर मान्छेलाई दमन गरेको कारणले हो महिलालाई दमन गरियो समलिङ्गका मान्छेलाई दमन गरियो त्यसैको परिणाम हो !
३) सिर्जनापछि स्रष्टाको मृत्यु हुन्छ भन्ने मान्यताको तपाईं पक्षमा कि विपक्षमा ?
• सिर्जनापछि स्रष्टाको मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरामा म विस्वास गर्दिनँ भाइ किनभने पहिला स्रष्टा बाँचेर अनि सिर्जना हुने कुरा हो !
४) साहित्यमा प्रणय र यौनजन्य विषयको प्रविष्टिलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
• मानव जीवनमा प्रणय र यौनजन्य कुरा छ भने साहित्यमा पनि त्यो विषय आउनु कुनै अनौठो कुरा होइन, तर यो शीष्ट र शालीन हुनुपर्छ !
५) आजका लेखकले आफ्नो लेखनलाई कुन दिशामा निर्देश गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
• आजका लेखकले समय, समाज विचार, कलालाई बोक्नुपर्छ यसै विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ दिशानिर्देश पनि यही हो !
६) विषयवस्तुका दृष्टिले आजका पाठकको खास रुचि क्षेत्र कुन हो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
• आजका पाठक सचेत र सजग छन् जुनसुकै विषय र क्षेत्रमा पनि सहज ढंगले सामाग्री पस्किन सक्यो भने रुचि राख्छन् !
७) साहित्य जागरण हो, सामाजिक रुपान्तरणको लागि यसले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा तपाईंको निजी र मौलिक अभिमत कस्तो छ ?
• साहित्य समाज रुपान्तरणको माध्यम हो त्यसमा विचार हुन्छ त्यही विचारले समाजलाई मात्र होइन मान्छेको संस्कारलाई पनि परिवर्तन गर्छ!
८) आजभोली समाजमा लामोसमय कुनै क्षेत्रमा लागेर अवकाशप्राप्त पछि आफ्नो आत्मावृतान्त भनेर पुस्तक लेखेर चर्चित हुन्छन नि साहित्य चर्चा कमाउने मध्यम हो त ?
• त्यसो गर्नेहरू पनि छन् हाम्रो सामाजिक सोच कस्तो खालको छ भने साहित्य लेखेर पैसा कमाउन हुँदैन भन्ने तर पैसा कमाउनै हुन्न भन्ने त छैन ! ईमानदार भएर कमाउनु पर्छ त्यस्तो लामो समय अन्य क्षेत्रमा बिताएर आत्मवृतान्त लेख्नेहरु पनि छन् तिनले पैसा नै कमाउनको लागि लेखेका हुन भने त्यो गलत काम हो!
९) समयसँगै विद्रोही कविताहरु पनि जन्मिरहेका छन यो विद्रोहीको उर्जा कहाँबाट मिल्यो अनुभव छ ?
• समयले जायज आवाज नसुनेपछि विद्रोह जन्मिन्छ ! म त्यही जमातभित्रकै मान्छे हुँ भाइ हामीलाई उर्जा समाजबाट मिल्छ !
१०) जीवनलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, सार्थक र उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्छ ?
• जीवनलाई मैले सृष्टिको सबैभन्दा सुन्दर फूलको रूपमा बुझेकी छु यसलाई सार्थक र उपलब्धिमुलक बनाउन मान्छेले मान्छेको मुल्य बुझेर आम मान्छेको हितमा काम गर्न आबस्यक छ !
झमक घिमिरेको हाल सम्मका प्रकाशित कृतिहरु :
संकल्प (कविता संग्रह )-२०५५
आफ्नै चिता अग्निशिखातिर(कविता संग्रह )- २०५७
मान्छे भित्रका योद्धाहरु (कविता संग्रह )-२०५७
अबसानपछिको आगमन (क्वाति संग्रह) -२०५७
सम्झनाका बाछिटाहरु (लेख संग्रह) -२०५७
नौलो प्रतिबिम्ब (कविता संग्रह )- -२०६०
पर्दा, समय र मान्छेहरु (कथा संग्रह)-२०६२
बेमौसमका आस्थाहरु (निबन्ध संग्रह )-२०६३
झमक घिमिरेका कविताहरु -२०६५
जीवन काँडा कि फूल (आत्मजिवनिपरक निबन्ध )-२०६७
रात र भूतप्रेतहरुको सन्त्रास (लेख संग्रह) -२०६७
समय बिम्ब (दैनिकी संग्रह) -२०७१
प्रेमिल आकाश (कविता संग्रह) -२०७३